PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-12-02 - ABAKWAMOTSEPE BELULE ISANDLA
ABAKWAMOTSEPE BELULE ISANDLA
Ilanga langeSonto - 2018-12-02 - Izindaba - TSEPO MOLEFE
IMPUNYELA yaseningizimu Afrika, udkt Patrice Motsepe, ibonga izimfundiso ezinhle zabazali bayo, ethi bayiyala ngokuthi uma inotha mayokwabela nabanye ngoba umuntu ngumuntu ngabantu.
Unxenxe osomabhizinisi ukuba ezindaweni abakuzona babe neso, babheke abaswele bese belula isandla ukuze kusizakale umphakathi.
Udkt Motsepe, ongusihlalo weMotsepe Foundation, ngeledlule ubehambele emgungundlovu ephelezelwa yinkosikazi yakhe, udkt Precious Moloi-motsepe, beyonikela emabandleni nasezikoleni zakule ndawo.
Laba bakwamotsepe bahlanganele elife Bible Church eholwa ngumfu Sabelo Manyathi ngaphandle kwedolobha lasemgungundlovu lapho obekubuthene khona abazalwane nabefundisi babo. Bekukhona nabafundi ebebehamba nothisha babo beyokwa- mukela amasheke ka-r150 000 isonto nesikole ngasinye obekudluliswa yimotsepe Foundation.
Amabandla ahlomule lapha yilona leli obekuhlanganelwe kulona, amaluthela asepietermaritzburg South Parish aholwa ngumfu Sibusiso Mosia, amasheshi asest Marks Parish aholwa ngumfu Mduduzi Ninela, amaKhatholika asest Augustine’s Parish, aholwa ngufata Thomas Zondi (OMI), amaweseli ase-edendale Circuit 805 aholwa ngumfu Vuyo Dlamini namarhabe Amanyeneyo (UPCSA) ase-edendale Congregation aholwa nguMfu Nicholas Bhengu namanye.
Izikole ezihlomulile yikwapata High, ifezokuhle Primary, i-ashdown Primary, i-edendale Technical High, icrystal Springs Primary, igeorgetown High nezinye.
Echaza ngemotsepe Foundation, udkt Motsepe uthe njengabaholi bayo benomkakhe bayafisa ukubuyisela emphakathini ngokuba bawulekelele lapho untula khona. Uthe bahambele emgu- ngundlovu ngalo uhlelo lokunikelela emphakathini.
“Abazali bami, ikakhulukazi umama, wangikhulisa ngokungiyala ethi uma nginotho angibohlephulela nabanye abantu.
“Ukuba nemali akusoze kwakujabulisa uma kuwukuthi abantu ohlala phakathi kwabo bona bayakhala ngenxa yenhlupheko ababhekene nayo. Ngicela nabanye osomabhizinisi balule isandla lapho bengakwazi khona ukuze kusizakale abampofu,” ubeke kanje.
Umfu Mosia wamaluthela ubonge imotsepe Foundation ngokubheka nasemabandleni aziwa ngawomthetho njengoba ethi amaningi awo akhiwa amajali- mane asezimishini eminyakeni eminingi edlule.
Umnu Siqhamo Mabinza, onguMqondisi womnyango wezemfundo esifundeni sasemgungundlovu, uthe uyethemba ukuthi lezi zikole abazikhethile futhi ezihlomule ngaphansi kohlelo lweMotsepe Foundation zizokwenza kahle manje.
ABASIZIKAZI baseluthela epietermaritzburg South Parish bebambe isheke elemukelwe yibandla labo kwimotsepe Foundation. Esithombeni banodkt Precious Motsepe ofake ijezi eliphuzi. Ekuqaleni kwesokudla ngundlunkulu Thobekile Maphumulo, imeya kumasipala wesifunda sasemgungundlovu.